Indlu enesiqingatha esenziwe yangoku kwifa lenqaba yenkulungwane ye-16
Eli likhaya leeholide elinamagumbi amahlanu elinembali eSaint-Aignan. Yakhiwe ngenkulungwane ye-16, yindlu enamaplanga anesiqingatha enika imvakalelo yasemaphandleni eyinyani. Ilungele iintsapho ezimbini.
Ikhaya likufuphi nechibi. Ungaya kwiParc Naturel eyimizuzu engama-30 yokuqhuba. Iinduli eziqengqelekayo zeSaosnois kunye namabala avulekileyo ajikeleze iSees kunye neAlencon ngumbono omkhulu. Lo mmandla unamahlathi anomtsalane, anje ngeÉcouves, Andaines, Perseigne, Sille kunye neAlps Mancelles. Uya kufumana iindawo zokutyela kunye nevenkile enkulu kumgama oziikhilomitha ezi-5.
Imigangatho yekhaya ishushu. Igumbi lokuhlala elibanzi kunye nekhitshi libonelela ngendawo eyaneleyo yokutya kunye. Igadi enkulu yabucala ejonge i-chateau kunye nepropathi yayo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla. Kukho i-terrace kunye ne-trampoline. Ikhaya liyabathanda abantwana kwaye linebhedi yabantwana kunye nesitulo esiphakamileyo.
Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane sikumgama oziikhilomitha ezisi-8.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (Igumbi lokuhlala(iTV, isitovu(inkuni), iDVD player), igumbi lokutyela, Ikhitshi(i-cooker(iceramic), i-oveni, imicrowave, idishwasher, ifriji-ifriji), Igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela(ibhedi ephindwe kabini, ibhafu yokuhlambela). , ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese), indlu yangasese)
Kumgangatho woku-1: (igumbi lokulala (ibhedi yebhedi), Igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela(ibhedi ephindwe kabini, ibhafu yokuhlambela, ishawa, isitya sokuhlambela), Igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela(2x ibhedi enye, ishawa, isitya sokuhlambela), Igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela(2x ibhedi eyodwa, ishawari, isitya sokuhlambela), indlu yangasese, yangasese, ukufudumeza(Ubushushu bomgangatho))
umatshini wokuhlamba, ukufudumeza(Ukufudumeza kuMgangatho), iterrace(yabucala), igadi, ifenitshala yegadi, indawo yokupaka, itrampoline, ibhedi yabantwana(ngesicelo), isitulo esiphezulu(ngesicelo)